के तपाईको दाँतमा किरा लागेको छ ? यस प्राकृतिक प्रयोगबाट तुरुन्त छुट्कारा पाउनुहोस् – Etajakhabar
के तपाईको दाँतमा किरा लागेको छ ? यस प्राकृतिक प्रयोगबाट तुरुन्त छुट्कारा पाउनुहोस्
ताजा खबर :- दाँतमा किरा लाग्ने समस्या त्यो बेला हुन्छ, जब दाँतको जरामा लामो समय सम्म खानाको अवशेष जम्मा रहन्छ । किरा दुई दाँतको बीच, गिजाको नजिक र यसको जरामा लाग्छ । जसबाट छुटकारा पाउनका लागि हामीले बजारमा उपलब्ध विभिन्न प्रोडक्टको प्रयोग गर्छौँ । जसले यस तथ्यलाई दावी गर्छ कि तपाईको दाँतबाट किरा गायब हुनेछ र साथै दाँत चम्किलो एकदम मोती जस्तो हुनेछ तर यी कुरामा कति सत्यता छ यसको विषयमा पुष्टि गर्न थोरै कठिन छ ।
बजारमा उपलब्ध प्रोडक्ट्समा भरिपूर्ण मात्रामा केमिकल पाईन्छ । जो दाँतको साथ-साथै स्वास्थ्यको लागि पनि नोक्सानदायक हुन्छ । यदि तपाईको दाँतमा किरा लागेको छ, दाँतमा दाग र पहेँलो भएको छ भने हामी तपाईलाई एक यस्तो प्राकृतिक उपायको बारेमा बताउँछौँ । जसको प्रयोगले यस समस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ । यस प्राकृतिक टूथपेस्ट प्रयोगले बलियो एवम् किरारहित दाँत हुनुको साथ-साथै सेतो चम्किलो र ब्याक्टेरिया मुक्त दाँत हुन्छ ।
जान्नुहोस्, यसलाई बनाउने विधि र प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा-
-३ चम्मच नरिवल तेल
-एक चम्मच नीमको पातबाट बनाइएको पाउडर
-३ चम्मच बेकिंग सोडा
-२-३ थोपा पिपरमिन्टको तेल
जहाँ नरिवल तेलले दाँतको केभिटीबाट आराम दिलाउँछ भने त्यहीँ बेकिंग सोडा दाँतलाई सेतो एवम् चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ । नीमले ब्याक्टेरियाबाट छुटकारा दिलाउँछ भने पिपरमेन्ट माउथ फ्रेशनरको रूपमा काम गर्छ । यसले गिजा सुन्निने समस्याबाट पनि आराम दिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४ समय: १:११:५७